ခိုးတော့ ခိုးလဲ ခိုးပေါ့… | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ခိုးတော့ ခိုးလဲ ခိုးပေါ့…
ခိုးတော့ ခိုးလဲ ခိုးပေါ့…
Posted by ေရႊ မင္း သား on Jul 24, 2012 in Copy/Paste | 25 comments
ကျနော်တို့ ဈေးထဲသွားမယ်ဆိုရင် အသားသည်၊ ငါးသည် တွေ အလေးချိန်မပြည့် ရင် အလေး ခိုးတယ်လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ဆီဝယ်လို့ ဂါလံ မပြည့်ရင် လဲ ဂါလံ ခိုးတယ် လို့ ဆိုကြပါတယ်။
ခင်ဗျား ဒီစာကို ဖတ်နေရင်း တစ်စုံတစ်ယောက် က ခင်ဗျားဆီကနေ တစ်ခုခု ခိုးသွားပါပြီ။
အဲဒါကို သတိထားမိကြလား …….
အချိန်တွေ ခိုးသွားတယ်… မျက်စိပါဝါအားတွေလဲ ပါသွားတယ်။
စပိ ဗျို့ စပိ
ခရုနဲ့ လိပ် အမျိုးစပ်ပြီး ထွတ်လာတဲ့ မြန်မာ့ မြန်နှုန်းမြင့် စပိ
ကျုပ်တို့ လဲ ပိုက်ဆံပေး ပြီး အွန်လိုင်းသုံးတာပါဗျ။ ကျုပ်တို့ ပေးသလောက် မှ မရ တာ။
အော်……ဘာလဲလို့ …..မြန်မာြ့မန် နှုန်းမြင့် စပိ ကိုပြောတာကိုး…………ဒါများ..
ကျုပ်ကတော့ ကျုပ်အမေ ပိုက်ပိုက် ကို သူမသိအောင် ယူသုံး ( အလွန် ့အလွန် ဘိုင်ပြတ်လေမှ ) တာက လွဲလို ့..
ကျန်ဘယ်သူ ့ဆီ ဘယ်ကနေ ကမှ မလုပ်ဖူးဘူးရယ်
ဘာရမလဲ ပေး ၁ဝ
ဟဲဟဲ ၁ဝ ရတယ် လေ………..
မှားနေတယ်လေ 10မဟုတ်တော့ဘူး 15ကျပ်လေ
ဂဇက်ရွာထဲမှာ ကိုယ်မရှိတုန်း ဘယ်သူတွေ
အော်ဟစ်ဆဲဆိုနေကြပါလိမ့် ကိုယ်မရှိရင် ရွာပျက်တော့မှာလိုလို။
စွဲမက်မှုတွေလေ။ စွဲမက်ပါတဲ့ အာရုံတွေပါလား။
အဒိန္နာဒါနာ ဝေရမဏိသိက္ခာပဒံ သမာဒိယာမိ။
အဒိန္နာဒါနာ အင်္ဂါ ၅-ပါး။ ။ ခိုးမှုကံမြောက်အင်္ဂါ ၅-ပါး။
(၁) ပရသန္တက – သူတစ်ပါးဥစ္စာဖြစ်ခြင်း၊
(၂) တထာသညာ – သူတစ်ပါးဥစ္စာဟုမှတ်ထင်ခြင်း၊
(၃) ထေယျစိတ္တ – ခိုးလိုသောစိတ်ရှိခြင်း၊
(၄) ဥပက္ကမ – ခိုးရန်လုံ့လပြုခြင်း၊
(၅) တေနဟာရ – ထိုလုံ့လဖြင့် ခိုးခြင်း။
ခိုးခြင်း ၂၅-ပါး။ ။ ပါရာဇိကဏ် ပါဠိတော် ၆၅။ ဋ္ဌ။ ပ-အုပ်။ ၂၆၃- ၃၃၀- ၃၃၁- ၃၃၂ တို့၌ အကျယ်ရှု။ ရဟန်း တော်များ အတွက် ပါရာဇိကဥပဒေပုဒ်မ ၂၊ အဒိန္နာဒါန် သိက္ခာပုဒ်၏ အသေးစိတ် ရှင်းလင်းချက် ၂၅-ပါး။
(၁) နာနာဘဏ္ဍ ပဉ္စကခေါ် ပိုင်ရှင်မပေးသော သက်ရှိသက်မဲ့ ပစ္စည်းဘဏ္ဍာ အမျိုးမျိုးတို့ကို အောက်ပါနည်း ငါးပါးဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(က) အာဒိနယ- ကျောင်း အိမ် မြေ ခြံစသည်တို့ကို လိမ်ညာသောနည်းဖြင့် တရားဆင်ကာ စွဲဆိုခိုးယူခြင်း မျိုး၊ ပိုင်ရှင်က စိတ်လျော့ ဝန်ချ လိုက်လျှင် ပါရာဇိက၊
(ခ) ဟရဏ-သည်ပိုးထမ်းဆောင်လာသော သူ့ပစ္စည်းကို ကိုယ့်ဥစ္စာ ဖြစ်အောင် ပြောဆို စွပ်စွဲ၍ ထမ်းဆောင် လာသော သူ၏ ကိုယ်ပေါ်မှ ကျစေလျက် ခိုးယူ ခြင်းမျိုး၊ သူ့ကိုယ် ပေါ်မှ ချလိုက်သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဂ) အဝဟရဏ-သူတစ်ပါးခေတ္တအပ်နှံထားသော သူပိုင်ဥစ္စာဘဏ္ဍာကို မအပ်ပါဟူ၍လည်းကောင်း ငါ့ဥစ္စာ ဖြစ်သည် ငါ့ဟာ ပြန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဟုလည်းကောင်း၊ လိမ်ညာ ပြောဆိုလျက် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ပိုင်ရှင် စိတ်လျှော့ ဝန်ချသည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဃ) ဣရိယာပထဝိကောပန- ထမ်းပိုးဆောင်ရွက် လာ သော သူတစ်ပါး ဥစ္စာကို ထမ်းဆောင် လာသူ နှင့်တကွ ထမ်းလာသည့် ဥစ္စာ ကိုပါ ခိုးယူ အံ့သော အကြံဖြင့် ပစ္စည်းရော လူပါ ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ပိုင်ရှင် စိတ်လျှော့ပြီး ဒုတိယ ခြေလှမ်းကြွ သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(င) ဌာနာစဝန- သူချထားသော ပစ္စည်းဥစ္စာကို ခိုးယူ လိုစိတ်ဖြင့် မူလနေရာမှ ရွေ့အောင် ကြွအောင်လုပ်ခြင်း မျိုး၊ ရွေ့သည် ကြွသည်နှင့် ပါရာဇိက ကျတော့၏၊ နာနာဘဏ္ဍပဉ္စကပြီး၏။
(၂) ဧကဘဏ္ဍ ပဉ္စက- ဤ၌ သက်ရှိ သဝိညာဏကဖြစ်သော ဘဏ္ဍာကိုသာ ယူရသည်၊ ခိုးယူခြင်းနည်း ငါးပါးမှာ နာနာဘဏ္ဍပဉ္စကအတိုင်း အာဒိနယ ဟရဏ အဝဟရဏ ဣရိယာပထ ဝိကောပန ဌာနာစဝန နည်းတို့ဖြင့် အတူတူပင်မှတ်လေ၊ ဧကဘဏ္ဍ ပဉ္စကပြီး၏။
(၃) သာဟတ္ထိက ပဉ္စက- ဤ၌ သက်မဲ့ဖြစ်သော အဝိညာဏကပစ္စည်းကို ပိုင်ရှင်မပေးပဲ အောက်ပါငါးနည်း ဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(က) သာဟတ္ထိက မိမိကိုယ်တိုင် ကိုယ်ထိလက်ရောက်ခိုးယူခြင်းမျိုး။
(ခ) အာဏတ္ထိက-ဤသူ၏ဘဏ္ဍာကို သွားခိုးချေဟုစေခိုင်းခြင်းမျိုး၊
(ဂ) နိဿဂ္ဂိယ- ကင်းခွန် အကောက်တော်စသည် မပေးရအောင် ဤဖက်နယ်ခြားမှ ထိုဖက်နယ်မြေသို့ ကျအောင် ပစ္စည်းဥစ္စာကို ပစ်သွင်း၍ သို့မဟုတ် တစ်နည်း နည်းဖြင့် ကြံဆ၍ ခိုးယူသွားခြင်းမျိုး၊
(ဃ) အတ္ထ သာဓက- ထိုသူ၏ဘဏ္ဍာကို အခွင့်သာတဲ့အခါ စွမ်းနိုင်တဲ့ အခါကို စောင့်ပြီး ခိုးယူ လိုက်ရ မည်ဟု စေခိုင်း ထားလျက် ခိုးယူ စေခြင်းမျိုး၊
(င) ဓုရ နိက္ခေပတရား၌စွဲ၍ယူခြင်း လိမ်ညာလှည့်ပတ်၍ယူခြင်း၌ ဥစ္စာပိုင်ရှင်က ငါတော့ရှုံးပါပြီ၊ ငါ့ဥစ္စာတော့မရတော့ ပါဘူးဟု ဝန်ချလိုက်ခြင်းမျိုး၊ သာဟတ္ထိက ပဉ္စက ပြီး၏။
(၄) ပုဗ္ဗ ပယောဂ ပဉ္စက- အရှင်မပေးသော ပစ္စည်းဘဏ္ဍာကို အောက်ပါနည်း ငါးမျိုးဖြင့် ခိုးယူခြင်း။
(က) ပုဗ္ဗ ပယောဂ- ၎င်းင်းခိုးနည်းကား အာဏတ္ထိကနှင့် သဘောတူဖြစ်၏၊
(ခ) သဟပယောဂ-လယ်မြေ ခြံမြေစသည်ကို နယ်ခြား မှတ်တိုင်ငုတ် စသည်ကို နုတ်၍ ရွှေ့ပြောင်း စိုက်နှက် ခိုးယူခြင်း၊
(ဂ) သံဝိဓါ ဝဟာရ- အချင်းချင်း စုပေါင်းတိုင်ပင်၍ ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ တိုင်ပင်စဉ် အခါက သဘောတူ ပါသူသည် ခိုးရာ၌ ပါပါ မပါပါ ပါရာဇိက၊
(ဃ) သင်္ကေတ ကမ္မ- အချိန်ကာလ နာရီအပိုင်းအခြား မှတ်သား ချိန်းချက် လျက် ဤမည်သော ဘဏ္ဍာကို ခိုးယူတော့ဟု ခိုးခိုင်း ခြင်းမျိုး၊ သူပေးသော အချိန်နှင့် ပစ္စည်း အတိုင်း ခိုးယူသော် ပါရာဇိက၊
(င) နိမိတ္တကမ္မ- မျက်စိမှိတ်ခြင်း၊ လက်မြှောက်ခြင်းစသော အမှတ် နိမိတ် သညာ တစ်ခုခု ထား၍ ခိုးခိုင်းခြင်း မျိုး၊ နိမိတ် ပြုလိုက် သည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် ခိုးငြားအံ့ နိမိတ် ပြသူ ပါရာဇိက၊ ပုဗ္ဗပယောဂပဉ္စက ပြီး၏။
(၅) ထေယျာ ဝဟာရ ပဉ္စက- ပိုင်ရှင်မပေးသော ပစ္စည်းဘဏ္ဍာကို အောက်ပါ နည်း ငါးမျိုးဖြင့် ခိုးယူ ခြင်းမျိုး။ (က) ထေယျာ ဝဟာရ- နံရံစသည် ဖေါက်ထွင်း ဖွင့်ဖြဲ၍ ခိုးခြင်း၊ တောင်းတင်း ချိန် အလေးစသည်တို့ကို စဉ်းလဲ ကောက်ကျစ်၍ ခိုးယူ ခြင်းမျိုး၊
(ခ) ပသယှာဝဟာရ- နိုင်ထက် စီးနင်း ပြု၍ ယူခြင်း၊ ဓါးပြတိုက် ယူခြင်း၊ ပုန်ကန် ထကြွ၍ ယူခြင်း၊ မင်းစိုးရာဇာ တို့သည် ရသင့်သော အခွင့်ထက် အာဏာ ပြ၍ ပိုမို ကောက်ခံ ခြင်းမျိုး၊
(ဂ) ပရိကပ္ပါဝဟာရ- ဤ၌
၁- ဘဏ္ဍာပရိကပ္ပခေါ် အထည်အလိပ်ကိုသာ ယူအံ့ဟူကြံစည်လျက် အခန်း တွင်းသို့ ဝင်သွားပြီး မှောင်ထဲ၌ အထုပ်ကြီးကိုထမ်းယူလာလျက် ကြည့်သော အခါ အထည် မဟုတ်ဘဲ ချည်ခင် တွေဖြစ် နေပါအံ့ ပါရာဇိက မကျ၊ အထည်လိပ် ဖြစ်နေ ပါက ပါရာဇိကကျ၏။
၂- ဩကာသပရိကပ္ပခေါ်အရပ်ဖြင့် ပိုင်းခြား ကြံစည်၍ ခိုးခြင်းကား ဤခြံဝင်း အတွင်း၌ ငါ့ကို တွေ့မြင် ပါမူ ဤပစ္စည်း ဥစ္စာကို ဤခြံဝင်း အတွင်း၌ လှည့်လည်ရင်း ကြည့်ရှုရန် ကိုင်လာ သယောင် ဆောင်၍ ပြန်ပေး လိုက်အံ့၊
အကယ်၍ တစ်စုံတစ်ယောက် နှင့်မှ မတွေ့ရပါမူ ခိုးယူ သွားအံ့ ဟူသော အကြံဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ အပိုင်းအခြား လွန်သည်နှင့် ပါရာဇိက၊
(ဃ) ပဋိ စ္ဆန္နာဝဟာရ- ပန်းခြံ ရေချိုးဆိပ်စသည်တို့၌ သူတစ်ပါး ချွတ်ချ ထားသော ဘဏ္ဍာကို ခိုးလိုစိတ်နှင့် နောက်မှ ယူအံ့ဟု ကြံလျက် မြေမှုန့် မြက်မှိုက် စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားပြီး ခိုးယူခြင်းမျိုး၊
(င) ကုသာ ဝဟာရ- မဲလိပ် စာရေးတံစသည်တို့ကို မိမိသို့ အကောင်း ရရန် ကြံစည်လျက် တစ်စုံတစ်ခုသော နည်းပရိယာယ်ဖြင့် ခိုးယူခြင်းမျိုး၊ ထေယျာ ဝဟာရ ပဉ္စကပြီး၏။
ခိုးခြင်း ပယောဂမျိုး ၆-ပါး။ ။ (၁) သ ဟတ္ထိက- ကိုယ်တိုင်ခိုးခြင်း၊ (၂) အာဏတ္တိက စေခိုင်း၍ ခိုးခြင်း၊ (၃) နိသဂ္ဂိက- နေရာရွှေ့ပြောင်းပစ်လွှင့်ခိုးခြင်း၊ (၄) ထာဝရ- တင်းတောင်း လိမ် ချိန်လိမ်စသည်ပြု၍ခိုးခြင်း၊ (၅) ဝိဇ္ဇာမယ- အမေ့ အဟန့်စသော အတတ်ပညာဖြင့်ခိုးခြင်း၊ (၆) ဣဒ္ဓိမယ- တန်ခိုးဖြင့် ခိုးခြင်း။
အူးပဇင်း… သူကြီး.. ဦးခိုင်…
ဦးဇင်း ဖော်ပြထားတာလေး ကတော်တော်မှတ်သားလိုက်ရပါတယ် ဗျာ ..ဂုဏ်တော် ထူးနှင့် ပြည့်စုံတော်မှု သော မြတ်စွာ ဘုရား
ကိုရွှေမင်းသားတော့ သဂျီးနဲ့တွေ့တော့မှ စပိ ..မြန်နှုံးမြင့်စပိ အတွက်နဲ့
ကံသင့်တော့မယ်…များလိုက်တဲ့ အချက်အလက်တွေ …။
သဂျီး နဲ့ ရွှေမင်းသားကို ကျေးဇူးတင်လိုက်တာ။
အဲဒီ ခိုးခြင်း ၂၅ပါးကို စာအုပ်တွေထဲ လိုက်ရှာနေတာ။
(စာမေးပွဲမှာ ခိုးချတာ ဘယ်ခိုးခြင်းထဲပါလဲ သိချင်လို့)
2 ကျပ်ပေးပီး 15 ကျပ်ပြန်ယူသွားဒါပေါ့
ရွှေမင်းသားရေ ဒီလိုအခိုးခံရဘို့အရေးကို သိန်းချီပြီးအကုန်ခံထားရတာလေ။
သူများဦးနှောက်အတွေးအခေါ်တွေကို ခိုးယူသွားပါသည် ။။။။။။
အခိုးခံ ချင်လို့ ပဲ ဆိုင်မှာလာ အချိန်ဖြုန်းနေကြတာ …။ ခိုး ဟေ့ ခိုး …. မင်းကြိုက်သလောက်သာ ခိုး
ရွှေမင်းသား စခန်းခဏလောက်လိုက်ခဲ့ပေးပါ။ (တရားစခန်း)
အချိန်ခိုးသွားတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားဟင် … ။
ဒီရက်ပိုင်း ကိုးနတ်ရှင်မကောင်းလို့ ပို့စ်တပု်ဒဖတ်ရဖို့အရေး .. အတော်အချိန်ပေးရတယ် … ။
ခိုးသွားကျပြန်ပြီ ဘာတွေခိုးသွားတာလည်း ဘာပြောပြော ၁၅ကျပ်တော့ရပြီ။